Maxay yihiin xeeladaha SEO ee ugu fiican ee gaadiidka?
Waa kuwan qaar ka mid ah xeeladaha loo adeegsado SEO-ga oo loogu talagalay sicirka taraafikada iyo isbedelka. Hubi inaad eegto lixdan tallaabood oo sahlan oo hoos ku xusan:
Macluumaadka isticmaalaha ardayga
Ku illaali raadinta Mashiinka Raadinta ee farsamo ahaan farsamo ahaan. Haa, bartilmaameedka koowaad ee qaybta libaaxa ee xeeladaha SEO ayaa gaaraya aqoonsi ka sii fiican oo ah robots search engine. Isla mar ahaantaana, wax-ku-oolinta raadintu waxay ku saabsan tahay baahida dhabta ah ee dadka dhageystayaasha ah ee la beegsanayo; Waxaan ula jeedaa inaan si fudud u ogaanno waxa dadka raadinaya, oo u siiyaan iyaga waxyaabaha aad ka kooban tahay. Sidaa darteed, tayada aad u taqaano dhagaystayaashaada, waayo-aragnimada dadka tayada leh ee aad bixisid. Tani waxay horseedi doontaa darajada sare ee SERPs. Habka ugu fudud ee loola macaamili karo si toos ah ayuu ula hadli doonaa booqdayaashaada, waxaanan soo jeedinayaa in ay ka jawaabaan su'aalahooda ugu badan ee mowduucda ku habboon, oo ay taageerayaan kuwa kale ee bixiya xalkooda. Sidoo kale, waxay noqon laheyd fikrad aad u fiican kaliya inaad nuqul ka dhigto qaar ka mid ah su'aalaha asaasiga ah si toos ah loogu isticmaalo madaxda madaxda posts. Ka shaqeynta boggaga soo degaya
Inta badan, marka xiriiradaada lagu soo bandhigo liiska SERPs
, dadku waxay u socdaan bogga internetka ama blog-kaaga taageeraya. Laakiin haddii aad mashquul tahay mashruuc ganacsi, tusaale ahaan, dukaanka internetka, waxaad si wanaagsan u yeelan laheyd bogga soo caansan oo si fiican loo iftiiminayo si loo abuuro iibsiyo ka wanaagsan ama taageerayaal badan. Abuuritaanka bogga soo dhoofinta micnaheedu waa in aad leedahay bog bog internet ah oo khaas ah oo mawduuc gaar ah leh. Iyada oo la tiirsanayo farsamooyinka SEO-ka, waxaan ku talinaynaa in aan sameeyo dhammaan wax-qabadka shaqada tallaabo tallaabo ah. Ugu horreyntii, ka hor intaadan bilaabin dhisidda bogga soo degaya, waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato weedho dheer oo muhiim ah. Taasna, ka shaqee cinwaanka iyo sharaxaadda meta. Makhaarigaaga soo dheji dhisay ugu yaraan 2,000 oo eray, maaddaama ay tahay meel lagu caddeeyo heerka sare ee natiijooyinka raadinta Google. Ha ka baqin in la maalgeliyo qadar caddaalad ah oo ah naqshad xirfadeed oo xirfad leh. Ugu dambeyntii, isku day inaad sameyso markhaati aad bogga soo degto oo aad ku raaxaysatid carshiga.
Dib u habeyn mawduucaaga
Tiknoolojiyada fiican ee mawduuca waxay ku salaysan yihiin fikrad sahlan - content waa boqor. Haa, waxaan ahay halgan halkan, maxaa yeelay waa fikrad macquul ah oo aad uga shaqeyn karto waxyaabahaaga si aad u gaarto qoraallada tayada leh ee ugu fiican ee leh khibrad la taaban karo oo la taaban karo. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa mid dhamaystiran oo shaqeyneysa waqti badan. Intii aad sidaas samayn lahayd, waxaan soo jeedinayaa in aad codsato qaar ka mid ah xeeladaha SEO si aad u qora qoraalkaaga. Isticmaal keliya isla qaabka loo bedelay qaabab kala duwan, tusaale ahaan, si loo muujiyo isticmaalka habboon oo loo adeegsado. Waxaan ula jeedaa inaad si sahlan u heli kartid boggagaaga blog-kaaga (ugu yaraan qayb ahaan) wax-barashada fiidiyowga oo qiimo leh, bandhigyo xiiso leh, podcasts ganaax, iyo waxyaabaha qaar taageeraya PDF. Xogta ugu sareeysa, samee qaybaha noocaas ah ee macluumaadka faa'iido leh oo wadaag ah-saaxiibtinimo si aad u heshid xiriiro badan iyo gaadiid. Weligaa kuma qoomamoonaysid inaad waqti ku qaadato Source .